ဘာကြောင့် ဘ၀ဟာ သိပ်ခက်ခဲနေရပါသလဲ? ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ ဒုက္ခခံစားနေရပါသလဲ (ယောဘ ၇း၁ CEV)
အဘယ့်ကြောင့် စီးပွားရးခေတ်ပျက်ဖြစ်ရပါသလဲ ? ကျွန်တော်တို့ ဘုရားရှင်ရဲ့ ငွေကြေးပညတ်ချက်များကို လစ်လျူရှုမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။
ငွေကြေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများဖြစ်သော စာရင်းကိုင်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းများထားခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း၊ ပေးလှုခြင်း၊ ရင်နှီးမြှတ်နှံခြင်း နှင့် အများနည်းတူနေထိုင်တတ်ခြင်း များသည် သမ္မာကျမ်းစာ စည်းမျဉ်း၊ ပညတ်ချက်များဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားရှင်က ထိုစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာလျှင် ဤလောကတွင် သင်သည် ကြွယ်ဝကောင်းစားမည်ဟု ပြောပါသည်။ လူတိုင်းကို သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ရန် မဆိုလိုပါ၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လိုက်လျှောက်ပါက သင်လိုအပ်သောအရာများကို ရမည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
အလွန်ဆိုးဝါးသောအဖြစ်ကို ကျွန်ုပ် ဤလောကတွင်တွေ့ရသည်။ လူအများသည် တချိန်၊ မိမိလိုအပ်လာချိန်မှာ သုံးစွဲရန် မိမိတို့ငွေကြေး၊ စည်းစိမ်ကို သိုထားသည်။ သို့သော် ထိုငွေကြေးအားလုံး မမျှော်လင့်သော အဖြစ်ဆိုးကြောင့် ကုန်ဆုံးသွားပြီး မိမိသားသမီးများကိုပင် အမွေမပေးနိုင်ပဲ လက်ချည်းနေရ၏ (ဒေသနာကျမ်း ၅း၁၃-၁၄ TEV) ဆော်လမုန်ဘုရင်ကြီး၏ အပြစ်သည် ယခုခေတ်တိုင်အောင် ဆက်လက်ရှိနေခြင်းကြောင့် ဟူသောမှတ်ချက်မှာ ယခုတိုင်မှန်ကန်ပါသည်။ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက်ကျဆင်းချိန် "ဒါ.. မဟုတ်သေးဘူး" ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ပြောမည်။ သို့သော် ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အပြစ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့်လောကတွင် နေထိုင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြုံတွေ့ရမည့်အဖြစ်ပင် ဖြစ်သည်။
အပြစ်တရားသည် ရည်မှန်းချက်၊ ဆောင်ရွက်စရာများ၊ အလုပ်အကိုင်များ ဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေသည်။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသော သင်၏လုပ်စရာများကို ဆုံးရှုံးစေသည်။ ဆော်လမုန်ဘုရင်ပင်လျှင် အပြစ်တရားမှ မလွတ်ကင်းနိုင်ပေ။ ဒေသနာကျမ်း ၂ တွင် ဆော်လမုန်ဘုရင်ကြီး ပြောသည်မှာ " ထို့ကြောင့် အသက်ရှင်ခြင်းကို ငါငြီးငွေ့၏၊၊ နေအောက်မှာ ပြုရသောမှုသည် ငါ၌ခက်ခဲ၏၊၊ အလုံးစုံတို့သည် အနတ္တအမှု၊ လေကို ကျက်စားသောအမှု ဖြစ်ကြ၏၊၊ ထို့ကြောင့်နေအောက်မှာ ငါကြိုးစားအားထုတ်သမျှတို့၌ မြော်လင့်စရာမရှိ၊၊ စိတ်ပျက်အောင်တဖန် ငါကြံ စည်၏၊၊(ဒေသနာကျမ်း ၂း ၁၇၊ ၂၀ NLT)
အလွန်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပြီး ငွေများစွာစုဆောင်းရရှိကာ၊ အမှုကိစ္စများစွားပြီးစီးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဘ၀ကျေနပ်မှုမရနိုင်ဟု ဆော်လမုန်ဘုရင်ကြီး သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ (သို့မဟုတ်) "အောင်မြင်မှု လှေခါးတစ်ခုကိုတက်သည်။ အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်သောအခါ လှေခါးသည်၊ မိမိတက်လိုသော နံရံမဟုတ်ကြောင်းသိရသောအခါ မိမိကြိုးစားသမျှ အချီးနှီးဖြစ်ရသည်" ဟုပြောနိုင်သည်။
ငွေကြေးပြသနာများ ကြုံနေရခြင်းမှာ ဘုရားရှင်ပေးသော ငွေကြေးကို မှားယွင်းစွာသုံးစွဲခြင်း အပြစ်တရားကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင့် ငွေကြေး နှင့် အသက်မွေးမှုဆိုင်ရာ အခြေအနေကို အချိန်ပေးပြီး သုံးသပ်ပါ။ ဘုရားရှင်ထံ ဆုတောင်းလျှင် သင်လိုအပ်သောအရာများကို ဘုရားရှင်က မြင်စေမည်ဖြစ်သည်။
Rick Warren's Sin Will Cause Financial and Vocational Difficulties Aug 6, 2011 ကို ဆီလျှော်အောင် မြန်မာဘာသာပြန်သည်။